Bill iyo Melinda: Xaaska Bill Gates oo arrin la yaab leh samaysay furiinka kaddib – ASM Raage
Bill Gates iyo xaaskiisa Melinda ayaa horaantii bishaan shaaciyay in ay soo afjarayaan guurkooda, kadib markii ay wada joogeen muddo 27 sano ah. Waxa ay sheegeen in “aanay u muuqan inay ka lammaane ahaan horumarkooda ka shaqeyn karaan”.
Xaaska Bill Gates Melinda, ayaa la sheegay in jasiirad gaar ah ay kiraysatay si ay uga fogaato warbaahinta oo aad u tebinaysay wararka ku saabsan furiinka lamaanahan, sida uu sheegay telefishinka Fox News.
Jasiiradda oo lagu magacaabo Calivigny, ayaa la sheegay in halkii habeen ay ku baxayso lacag gaaraysa $132,000 oo doollarka Maraykanka ah, sida lagu sheegay wargayska NEW YORK POST.
Waxaa jasiiradda Melinda ku wehliyay carruurteeda iyo qoysaskooda.
Jasiiradda oo 80-hektar ah, ayaa waxa ku yaala 25 “qol oo qurux badan iyo gurya kale,” waxaana sidoo kale shan daqiiqo lagu gaarayaa doon jasiiradda weyn ee Grenada.
“Kadib dedaal dheer oo ku aaddan xiriirkeena, waxaan go’aansanay in aan kala tagno,” ayay ku shaaciyeen baraha ay ku leeyihiin Twitter xilligii ay ku dhawaaqayeen furiinkooda.
Lammaanaha ayaa isbartay 1980-meeyadii xilligaas oo ay Melinda ku biirtay shirkadda Microsoft ee uu leeyahay Bill.
Waxa ay isu dhaleen saddex carruur ah, si wadajir ah ayayna u maamulaan hay’adda samafalka ee Bill & Melinda Gates oo ah tan ugu weyn caalamka
warbixino dheeraad ah oo la xariira furiin bilgates hoos ka aqriso
Farriinta quruxda badan ee Bill Gates uusan soo dirin
Waa kuma ninka Bill Gates kaalinta qofka labaad ee ugu taajirsan dunida kala baxay?
Sawirro: Wehelkii iyo Wadajirkii Bill iyo Melinda Gates
Sidee ayay isku barteen Lamaanahan?
Waxa ay sanadkii 1994 ku aqal-galeen jasiiradda Lanai ee gobolka Hawaii, iyagoo sida la sheegay kireystay dhammaan diyaaradaha helicopter-ka ah ee deegaankaas si ay uga hortagaan in dad aysan casuumin ay dul maraan jasiiradda.
Waxa ay isu dhaleen saddex carruur ah, si wadajir ah ayayna u maamulaan hay’adda samafalka ee Bill & Melinda Gates oo ah tan ugu weyn caalamka.
Hay’adda ayaa balaayiin doollar ku bixisay la dagaallanka cudurrada iyo dhiiragelinta tallaalka carruurta.
Lammaanaha oo kaashanaya maalqabeenka kale ee Warren Buffett ayaa billaabay ololaha Giving Pledge, oo ugu baaqa dadka dhaqaalaha haysta inay maalkooda ku bixiyaan samafalka.
Bill Gates ayaa hadda ah ninka afaraad ee ugu taajirsan caalamka, waxaana uu haystaa 124 bilyan oo dollar, sida ay shaacisay majalladda Forbes.
Waxa uu dhaqaalaha ka sameeyay shirkadda uu wax ka asaasay ee Microsoft, oo ah tan ugu weyn ee samaysa barnaamijyada Software-ka ee ay ku shaqeeyaan kumbuyuuraatka caalamka oo dhan.
“27-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan korinay saddex canug oo aad u wanaagsan, waxaana samaynay hay’ad ka hawlgasha guud ahaan caalamka, dadkana u sahasha inay helaan noolal caafimaad iyo wax soo saar leh,” ayay ku sheegeen war qoraal ah oo ay wadajir u soo saareen.
“Waxaan ka sii wada shaqeyn doonnaa hay’adda, balse nooma muuqata in aan lamaane ahaan horumarkeena ka sii shaqeyn karno wejiga xiga ee noolasheena”, ayaa lagu yiri warka qoraalka ah.
Madaxweyne Qoor Qoor oo ku mashquulsan xalinta Xiisad ka dhalatay Dilka Sheekh Cali Dheere